တစ်နပ်စားဥာဏ် | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
Leaveareply	ခုရက်ပိုင်းအတွင်း အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ ၉မိုင် စက်မှုလယ်ယာကို Company ထိုးပေးတော့မယ့်ကိစ္စ ကို အတော်များများ ဖတ်နေရတာရယ် ၊ ဂျာနယ် တစ်စောင်ပေါ်မှာ လယ်/ဆည် ၀န်ကြီးဆိုတာ အပြောသာသိပ်မတတ်တာ အလုပ်တော.လုပ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စာလေးတစ်ခု ဖတ်မိတာရယ်၊ တောင်သူလယ်သမားနေ့ ၀န်းကျင်ဖြစ်နေတာရယ်ကြောင် ဒီစာလေး ရေးဖြစ်တာပါ ။
လယ်/ဆည်ဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင် ဒီပုဂ္ဂိုလ် ရဲ. ယူနီဖောင်းဝတ် ဘ၀အကြောင်းတော. မသိဘူးဗျ ၊ ဒါပေမယ်. ၀န်ကြီးဖြစ်လို့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ပျဉ်းမနား စက်မှုလယ်ယာ အလတ်စား စက်ရုံကိုရောက်လာတယ်ဗျ ။ စက်ရုံထဲရောက် တစ်ချက်နှစ်ချက်ကြည့် ပြီးတာနဲ. ဘာပြောလဲသိလား ၊ ငါ -ိုး မင်းတို့စက်မှုလယ်ယာက အခွံချည်းပဲရှိတာပဲတဲ့၊ အင်း ပညာတတ်တစ်ယောက် နှုတ်ထွက်ပေါ.ဗျာ ။ ဒီလိုနဲ. သူ. ရာထူးရက်သား ဘ၀မှာပဲ နိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက် ကောက်စိုက်စက် တစ်ခုထွင်ခိုင်းတယ်ဗျ၊ ဘယ်လိုထွင်ခိုင်းတာလဲ ဆိုတော့ စက်မှုလယ်ယာ DG ကနေ တစ်ဆင့် ကိုရီးယားက ကောက်စိုက်စက်ပုံ တစ်ပုံပြပြီး တစ်ပတ်အတွင်း တီထွင်ပါတဲ့၊ ဘာအချက်အလက် မှမသိရ ၊ဘာမှလေ့လာချိန်မရှိ ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံကြည့်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်းရှိတာနဲ့ အပြီးထွင်တဲ့ ၊ကဲ ဒါ.အပြင် သူက ဖိအားပေးသေးတယ်ဗျ ၊ကျုပ်က ဗိုက်ဆာနေတုန်းအချိန် ကိုပဲစားချင်တာ၊ ဒီအချိန်ပဲကျွေးပါ၊ ပြီးလို.ရင်ခံသွားပြီး လေတက်နေချိန်မှ လာကျွေးလို့ကတော. လုံးဝစိတ်မ၀င်စားဘူးတဲ့။ ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်ပညာမဲ့ ထွင်သွားမှန်းမသိတဲ့ ရေဘူး ပေါက်တဲ့စကားထက်တော. ခြမ်းခြောက်သံပါပါ.ဗျာ ။
စက်မှုလယ်ယာက လူတွေကလည်းဗျာ မခံချင်စိတ်ရော ၊ DG ရဲ.ဖိအားကြောင်.ရော နေ.မအိပ်ညမအိပ် လုပ်လိုက်ရတာဗျို့၊ နောက်တစ်ခါလာတာတော. စက်အလုံး၂၀ ကို ၂ပတ်အတွင်းအပြီးထုတ်ပါတဲ့ ။ဆိုလိုတာက ဒီလိုအဆင်ခြင်မဲ့ အချိန်ကန့်သတ် အခိုင်းခံရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက ဘာတွေဖြစ်လာလည်းဆိုတော့ အရည်အသွေးက စကားပြောတော့ တာပေါ.ဗျာ ၊ ဒါ.အပြင် အဲ့ဒီစက်ကို ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ဆည်မြောင်းကို သွားထွင်ခိုင်းသေးသဗျ၊ သူ.ကျေးဇူးရှင်လေးကို ကျေးဇူးပြုဖို.ထင်ပါ. ဒါတောင်သူ့အဘ ဦးစိုးသိန်းက ဆည်မြောင်းနဲ. ဒီစက်ထုတ်လုပ်တာ ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြောလိုက်လို.ရပ်သွားတာဗျ။ စက်ထွင်ပြီးတော.လည်း သူက စက်ပေါ်တက်ထိုင်ကြည့်သေးတာဗျ၊ ပြီးတော့ စက်မှုလယ်ယာ DG ကို မင်းဒီစက်မောင်းဘူးလား ဒီလိုထိုင်ဘူးလား ဆိုပြိးမေးသေးတာဗျ (ဒါတောင်သူ ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးကြည့် ရသေးတာတော. မဟုတ်ဘူးနော်)။ ကျုပ်တို့ စက်မှုလယ်ယာရဲ့ အင်မတန်ရဲရင့် ထက်မြက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ DG လည်း သူ့ကိုတော…. အေးပေါ.လေ ဗုဒ္ဓဘာသာပီပီ ကိုယ့်ထက်အကြီး ကိုယ့်အထက်အရာရှိဆိုတော.လည်း..။
သူကပြောသေးတယ် ကျုပ်ကစစ်သား၊ သေနတ်ပစ်တတ်တယ်ဗျတဲ့၊ ကျုပ်တစ်ခုသတိသွားရမိပါရဲ.တပ်မတော်မှာ တိုက်ပွဲဝင် အရာရှိတွေကိုပြောလေ့ ရှိတဲ့- မင်းတို.က စစ်တိုက်နေရတာနော် သေနတ်ဝင်ပစ်နေဖို့ပဲ စိတ်ကူးမနေနဲ့ စစ်တိုက်ဖို့လုပ် ဆိုတာအရ ဆိုရင်တော့ သေနတ်ကတော့ တပ်သားသစ်တောင် ပစ်တတ်တယ်ဗျ။ အဲ့လိုတွေ အတင်းတည်ထွင်ခိုင်း၊ ၀န်ထမ်းတွေကိုနေ့၊ မအိပ် ညမအိပ် လည်း နှိပ်စက်ပြီးရော ဘာလုပ်လည်းသိလား၊ Good Brother Companyကို တရုပ်ကောက်စိုက်စက် အစီး ရာဂဏန်း သွင်းခိုင်းလိုက်တယ်ဗျာ၊ အဲဒါတွေက ခုထိ စက်မှုလယ်ယာ အရောင်းဆိုင် နဲ့ စခန်းတစ်ချို့မှာ ဖုံတွေတက်လို့၊ ဘယ်သူမှလည်း ဝယ်မယ့်သူ မရှိဘူးလေ။
ပြီးတော့ သူအခုဂုဏ်ယူနေတဲ့ အဆင့်မြင့် လယ်ယာတွေ၊ ဒါတွေအတွက်လည်း ဆည်မြောင်း ၊စိုက်ပျိုးရေး ၊ စက်မှုလယ်ယာ ၀န်ထမ်းတွေအကုန်လုံး နေ့မအိပ် ညမအိပ်လုပ်ကြရတာဗျ ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်ရက်ပြီးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဘာတွေဖြစ်လာလည်းဆိုတော. လယ်ကွက်တွေ မြေညှိုတော. နေရာတိုင်းကမညီ၊ အဲ့ဒီတော. နိမ့် နေတဲ့နေရာတွေမှာ နုံးတွေကသွားစု၊ အဲဒါတွေခပ်ထုတ် ၊ အိတ်တွေဖို့ ၊ ထရံတွေခင်း မြေကြီးပြန်တင် ပြီး ကွင်းဖြစ်အောင် စပါးစိုက်လို့ရအောင် ဖြစ်သလို လုပ်ရတာတွေ ဖြစ်ကုန်ရောဗျ။ ဒီတစ်နှစ်တော့ အဆင်ပြေမှာပေါ့ဗျာ ၊နောင်နှစ်တော. မသိဘူးပေါ့။
ဒါနဲ.ပတ်သက်လို.လည်း သူ.ရဲ. လက်စွဲတော် စပ်မျိုးစပါး တစ်ဧက တင်း၃၀၀ ဆိုတာကိုတော. ၀င်ရိတ်ဖူးတဲ့တစ်ချို.ပြောတာ အလွန်ဆုံး ၁၈၀ ပါတဲ့၊ ပြီးခဲ့တဲ့ မိုးစပါးရိတ်တဲ့ သူတစ်ချို့ကတော့၈၀ ပဲထွက်တယ်တဲ့၊ သူပြပြနေတဲ့ လယ်ကွင်းတွေကတော့ ရေကို အချိန်မရွေး လိုသလောက်ပေး၊ ဓါတ်မြေသြဇာကိုလည်း အလကားရသလို ကျွေးထားတော့ နီးစပ်ရင်လည်း နီးစပ်မှာပေါ.တဲ့၊ ဒါပေမယ့် ဒါက စပါးထွက်ရင်ပြီးရော စိုက်တာလား၊ ထုတ်လုပ်စိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ်က ကိုယ်.လယ် ကိုယ်.ဆီ ကိုယ်.စက်နဲ. ကိုယ်.ဘာသာထွန်ပြီး ကိုယ့်ဓါတ်မြေသြဇာ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ. ၀ယ်ထည့် ရရင်ကော အသားတင်အမြတ်က၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ဒက္ခိဏသီရိ ဧက ၃၀၀၀ ဖွင်. ပွဲမှာ စက်မှုလယ်ယာ DG ပြောတာကိုပဲကြည့်ပါ ။ အဲ့ဒိ ဧက ၃၀၀၀ အတွက် ထွန်စက်ကြီး ၅၆ စီး ၀န်ထမ်း၁၀၈ ဦး နဲ.၂လကျော် နားရက်မရှိ ဖော်ထုတ်ခဲ့တာပါတဲ့၊ ဒီစားရိတ်တွေကိုရော အားလုံးပေါင်း ဘယ်လောက်ဖြစ်နေမယ် ထင်လဲ၊ စက်သုံးဆီ၊ ၀န်ထမ်း စားရိတ်တွေထည့် တွက်ရင်ကော ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆည်မြောင်းညွန်မှုးက ကုန်ထုတ်လမ်း ၄၇ မိုင်၊ ရေပေးမြောင်း ၅၉မိုင်၊ ရေနုတ်မြောင်း ၉၇ မိုင်ကို အချိန် ၄ လခန်.ယူပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ရတယ်တဲ့ ၊ဒီစ၇ိတ်တွေကရော ကျုပ်ပြောချင်တာက နိုင်ငံအတွက် တကယ်ကောင်းမယ်ဆို လုပ်ပါ ဒါပေမယ်. ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ. ကိစ္စတစ်ခုအောင်မြင်ဖို. ကျန်တာတွေ ထည်.မတွက်ကြေးဆိုရင်တော. မဟုတ်သေးပါဘူး။ ပြီးတော. ဒီတစ်နှစ် နှစ်နှစ် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ စီမံကိန်းအောင်မြင်တယ်ဆိုတာပြဖို. ဓါတ်မြေသြဇာလိုမျိုးကအစ အတိုင်းအဆမဲ့သုံး နောင်လည်းကျရော….။
ဒါတွေက ခုတရုပ်တွေ ဖရဲငှားစိုက်နေကြတဲ့မြေတွေမှာ ဒီပြဿနာတွေကြုံနေရပါပြီ။ ပြီးတော. ဒီစုပေါင်းလယ်ယာ ကိစ္စ Company တွေနဲ. လုပ်ချင်တာဘယ်သူ.ဆန္ဒပါလဲ။ ဘာကြောင်.ပါလဲ ဒါအလကားသိချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒဂုံတောင်ပြည်သူ.လွှတ်တော်အမတ် ကမေးတာကို လယ်ဆည် ဒုဝန်ကြီး ဦးအုန်းသန်းဖြေတုန်းက ခောတ်မှီ စက်မှုလယ်ယာသို့ ကူးပြောင်းပြီး လယ်ယာမြေများပေါ်တွင် မိမိကျွမ်းကျင်သည်.လုပ်ငန်း ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင်. ထိုက်တန်သော လုပ်အားခများရပြီး မိသားစု အလုပ်အကိုင်နှင့် ၀င်ငွေ များတိုးတက်ရရှိနေကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ၇ လပိုင်း လွှတ်တော်မှာဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ရက်ပိုင်း ၂၀၁၂ ဇူလိုင် ၂၇ ထုတ် 7Day News ဂျာနယ်မှာတော. ညောင်ပင်ကျေးရွာ လယ်သမားကြီး ဦးဝင်းစိန်က – လယ်ကလုပ်ခမရတာ ၂နှစ်ကျော်ပြီ သားသမီးလုပ်စာနဲ. စားနေရတာ၊ လယ်ရှိရင် သီးစားချထားလို့ ရတယ်ဆိုပြီး ဖြေကြားသွားခဲ့သလို သရက်ပင်ချောင်က အသက်၅၀ကျော် လယ်သမားကြီး ဦးမောင်ညိုကလည်း စပါးရောင်းစရာ မရှိဘူး၊ ဆန်လည်းရောင်းစရာမရှိဘူး ဈေးက၀ယ်စားနေရတယ် တဲ့။
ကဲ ဒါလယ်သမားတွေပြောတာ အဲဒီတော. ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ Company တွေကရော ဘာတွေပြောလဲ ကြည့်ရအောင် အဲဒီဆောင်းပါးမှာပဲ ပါပါတယ် ဧဒင်ဦးချစ်ခိုင်က စိုက်ပျိုးရေးဖွံ.ဖြိုးဖို့ အတွက် အထူးဇုန်ဆိုပြီး တာဝန်ပေးလို.လုပ်ရတာပါတဲ့။ ကဲနောက်တစ်ယောက် ပင်လယ်ကိုးသွယ် Company ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်းဦးက -ကျွန်တော်တို.က လယ်သမားသားသမီးတွေပဲ လယ်မလုပ်ချင်လို့ မြို.ပေါ်တက်လာတာ၊ နိုင်ငံတော်ကတာဝန် ပေးလို.လုပ်ရတာ၊ ဒီဒဂုံဆိပ်ကမ်း စံပြ စက်မှုလယ်ယာ စီမံကိန်းဆိုရင် စီမံကိန်းစစဉ်ကနေ လယ်ဧက ၅၀၀ မြေ ပြင်၊ ကုတ်ထုတ်လမ်းဖောက်၊ မီးသွယ်နဲ. ကျပ်သန်း ၁၅၀၀၀ မြှပ်နှံထားရပါတယ်တဲ့၊ အဲဒီ စီမံကိန်းဟာ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၉ ရွာနဲ့ Company ၁၅ခု အကျိုးတူဆောင်ရွက်တာပါတဲ့၊ Company က လယ်လုပ်ခွင်.မပြုလို. အဲဒီ၉ရွာက လယ်သမား ၁၀၈၅ ယောက် အလုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို.ရေးထားပါတယ်။ (အဲဒီမှာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ. မိသားစု Company က နိုင်ငံတော်ပိုင်စက်တွေ ၊နိုင်ငံတော်ပိုင်ဆီတွေ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ. ၀န်ထမ်းဖြစ်တဲ့ ၉မိုင်စက်မှု လယ်ယာဝန်ထမ်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်အခမဲ့ ယူသုံးပြီး နဂါးမောက်ပင်ကအစ စိုက်ခိုင်းတာတွေတော့ မပြောတော.ပါဘူး၊ ဘာလို.လည်းဆိုတော. အဲဒီကိစ္စလိုက်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေး တစ်ယောက်ရာထူးက ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ အတည်ပြုချက်မရတဲ့ သတင်းကြောင့် တွေးကြောက်တာရယ်၊ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း လမ်းလျှောက်ရင် စကားပြောရင် ပုဆိုးလှည့် မပြောတတ်ပေမယ့် သူ့ကိုစကားပြောတာ တိုက်ပုံအကျီင်္ထဲ လက်ထည့် ပြောလို.ဆိုပြီး အရာရှိတစ်ယောက်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရယ်ကြောင်. မပြောရဲပါဘူး)။ ပြောချင်တာက ဒီနှစ်ဖက်လုံးက မလုပ်ချင် အကျိုးအမြတ်မရှိသလိုကိစ္စကို ဘယ်သူက ဘာကြောင့် အတင်းဖိအားပေးခိုင်းရတာပါလဲ ၊ခုခောတ်က အာဏာနဲ့ ဖိခိုင်းတဲ့ခောတ်တော.မဖြစ်သင့် တော့ပါဘူး၊
ခုနောက်တစ်ခုလာပြန်ပါပြီ ၊ ၉မိုင်စက်မှုလယ်ယာ ငှားတဲ့ကိစ္စ၊ ၀န်ထမ်းတွေကလည်း ဒီမှာပဲ ဆက်လုပ်ချင်ကြ သလို Company ကလည်း သူတို့ မလုပ်ချင်ပဲ အတင်းထိုးပေးလို.လုပ်ရတာပါ၊ သူတို.လုပ်လည်း မလုပ်တတ်ပါဘူးလို့ ပြောနေတဲ့ကြားထဲက အတင်းထိုးပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ။ Company ကလည်း သူ့ဆီနေခဲ့မယ့်ဝန်ထမ်းတွေတောင် အစိုးရဋ္ဌာနတွေဆီလိုက်သွားပါ၊ အဲ့ဒီက ပိုအာမခံချက်ရှိတယ် ရှိတယ်ဆိုပြီး တောင်တောခြောက် ထုတ်နေပါတယ်တဲ့၊ ဒါဆိုဘယ်သူ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဒီစက်ရုံလွှဲတာပါလဲ။ ဒီဝန်ကြီးဌာနအောက်က လွှဲပြီးသား စက်ရုံ ၄၀ကျော် စာချုပ်ပါစည်းမျဉ်း တွေအတိုင်းတကယ်လိုက်နာ/မနာ ဘယ်အဖွဲ.က တာဝန်ယူစစ်ဆေးနေပြီး မညီရင် ဘယ်လိုအရေးယူနေပါသလဲ၊ ဘယ်သူတွေကိုအရေးယူနေပါသလဲ။ အဲ့ဒီ လွှဲယူခဲ့တဲ့ စက်ရုံ ၄၀ ကျော်ကရော တကယ်လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေပါရဲ.လား။
ခုလိုမယူချင်ပဲ အတင်းယူခိုင်းလို. ယူရတာပါဆိုတဲ့ စက်ရုံတွေ လုပ်ငန်းတွေကျရင်ကော ပိတ်ထားရင် ၊ အခြားလုပ်ငန်းပြောင်းလုပ်ရင်၊ တစ်ဆင့် ငှားစားရင် ဘယ်သူ့ကိုအရေးယူမှာပါလဲ အဲဒီစက်ရုံ ၄၀ ကျော်က ထောင်ချီနေတဲ့ နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းအားလုံးရော ရသင့် ရထိုက်တဲ့အခွင်.အရေးတွေ ရသွားကြပါသလား ၊ဘယ်နှစ်ယောက်အလုပ်ပြုတ်သွားပြီး မိသားစု ဘယ်နှစ်ခုအခြေပျက်သွားပါသလဲ၊ ဒါတွေကရော ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိနေပါသလဲ။ ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုး တကယ်ပဲဟုတ်တော.မလိုလိုနဲ. အဖျား၇ှုးသွားမယ်.ကိစ္စမျိုးတော. အခြေပျက်သွားတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဘက်ကနေခံစားပြီး ခွင်.မလွှတ်ချင်စရာပါ။ နိုင်ငံတော်ရဲ. Policy အရ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေကို ပုဂ္ဂလိပိုင်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရေးကို မဝေဖန်လိုပေမယ့် ဒီ့ထက် စနစ်ကျတဲ့၊ ဒီ.ထက်မြင်သာ ထင်သာရှိတဲ့၊ နိုင်ငံ့တော်အတွက်ရော ၀န်ထမ်းတွေအတွက်ပါ ဒီ့ထက်ပိုအကျိုးရှိမယ့်၊ ဒီ့ထက်ပို စည်းစနစ်ကျတဲ့ လွှဲပြောင်းပုံမျိုးကသာ ဖြစ်သင့်တဲ့အရာပါ။ ခုဆို မန္တလေး တိုင်းက အငြိမ်းစားတွေကလည်း သူတို့တိုင်းထဲက ပုဂ္ဂလိက လှိမ့်ပေးနေတဲ့ကိစ္စတွေ သေချာစိစစ်ဆိုင်းငံ့ဖို့တွေ သမ္မတဆီ စာတင်တယ်လို.လည်းပြောပါတယ်။
အဲဒီတော.ဗျာ၊ နောက်ဆုံးဖြစ်ချင်တာက ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်.တာဝန်တော့ ကိုယ်ယူကြစေချင်တယ်ဗျာ တာင်းပန်လိုက်ရုံနဲ့၊ စေတနာအမှားပါလို့ ပြောရုံနဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ. အချို့ အကျိုးစီးပွားတွေက ပြန်ကောင်း လာတတ်တာမျိုးတော. မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင်.ဒီဝန်ကြီးဋ္ဌာနအောက်က ဖြစ်ရပ်တွေဟာ တကယ်ဖြစ်သင့် တာတွေလား၊ မဟာဗျုဟာ မှန်ပေမယ့် နည်းဗျုဟာပိုင်းရော ဟုတ်ရဲ.လားဆိုတာတွေတော. ပြန်လည်စစ်ဆေး စေချင်ပါကြောင်း တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။
အငြိမ်းစား လယ်/ဆည် ဝန်ထမ်းတဦး။
This entry was posted in Uncategorized on March 2, 2013 by koshwehtoo.	Post navigation
← ပို့ကုန် ၁၅၂၊ သွင်းကုန် ၁၆၆
အာဏာသိမ်းဖို့ အခွင့်သာလေပြီလော? →